लोक सेवा आयोगको अन्तर्वार्ता प्रक्रियाबारे जान्नैपर्ने कुराहरु - Sacho Post
२०७७ भाद्र ५, शुक्रबार १२:२२ बजे
१. पृष्ठभूमि : लोकसेवा आयोग नेपालको निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने एक संवैधानिक निकाय हो । यसले निजामती सेवामा आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने, रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने, दरखास्त रुजु गर्ने, स्वीकृत गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने एवं सिफारिस गर्ने जस्ता महìवपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ ।
हाल आएर सुरक्षा निकाय, सङ्गठित संस्था एवं सार्वजनिक संस्थानका पदमा पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई थप भएको छ । यसै व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकाय तथा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरूमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने यस्ता कार्य नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६, लोकसेवा आयोग नियमावली २०६७, लोकसेवा आयोग (कार्य संचालन) निर्देशिका २०६७ र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष विज्ञ र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, २०६९ अनुसार गर्दछ ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने यस्ता कार्य निष्पक्ष र आवश्यकता अनुसार गोप्य हुने गर्दछन् । लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको भर्नादेखि छनौटसम्म गर्ने सबै कार्य अत्यन्त स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुन्छन् । यसले गर्ने कार्यमा शङ्का, आग्रह एवं पूर्वाग्रह गर्ने कुनै ठाउँ हुँदैन । लोकसेवा आयोग यस्तो पवित्र संस्था हो, जसले धनी, गरिब, पहँुंच भएका, नभएका, जातजाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि केही पनि हेर्र्दैन । यसले तोकिएको शैक्षिक योग्यता र व्यक्तिको क्षमता मात्र हेर्दछ । यो आफ्नो कार्य गर्नमा कानूनी र संस्थागत दुवै दृष्टिले स्वतन्त्र र स्वायत्त छ । त्यसैले यसले गर्ने कार्यमा कहिलेकाहीँ सानो मानवीय गल्ती बाहेक अरू कार्यमा दोष दिने कुनै ठाउँ देखिएको छैन । यसले गर्ने कार्य अन्तर्गत अन्तर्वार्ता पनि एउटा प्रमुख कार्य हो, जुन लिखित परीक्षामा सफल भएपछि मात्र सुरु हुन्छ ।
लिखित परीक्षाको नतिजामा सफल भएका परीक्षार्थी मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँछन् । लिखित परीक्षाको नतिजामा रिक्त पदमा निम्न बमोजिम थप सङ्ख्या समावेश गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी गराउने व्यवस्था छ
सि.नं. रिक्त पद सङ्ख्या थप हुने सङ्ख्या अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने सङ्ख्य
अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू अन्तर्वार्ता लिने कोठाभित्र पृथक पृथक बस्छन् । उनीहरूले सामान्यतयाः पालो गरेर प्रश्न गर्दछन् । एकले दिने अङ्क अर्कोले देख्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ । पृथक पृथक रूपमा परीक्षार्थीको गोप्य मूल्याङ्कन गरिन्छ । उनीहरूले प्रश्नको उत्तरप्रति तटस्थ र वस्तुनिष्ठ भएर व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्दछन् । अन्तर्वार्ता समितिका अध्यक्ष र सदस्यले अन्तर्वार्ता भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिको मूल्याङ्कन खेस्रा कागजमा गरी सबै उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता समाप्त भएपछि मात्र फाराममा अङ्क चढाउने गर्छन् । अन्तर्वार्तामा भाग लिने उम्मेदवारसँग अन्तर्वार्ता समितिको अध्यक्ष वा सदस्य नाता पर्ने भएमा अन्तर्वार्ताकार उक्त अन्तर्वार्तामा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । अन्तर्वार्तामा अन्तर्वार्ताकारले दिन पाउने कुल अङ्कको अधिकतम ७० प्रतिशत र न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्कको सीमा तोकिएको हुन्छ । त्यही सीमा भित्र अङ्क दिइन्छ । सीमा बाहिर गएर अङ्क दिनु पर्दा स्पष्टीकरण दिनु पर्ने हुन्छ । सामान्यतयाः सीमा बाहिर हालसम्म कोही नगएको भन्ने बुझिएको छ । सवैले दिएको अङ्क जोडेर सदस्य सङ्ख्याले भाग गरी अन्तर्वार्ताको औसत अङ्क निकाल्ने चलन छ । यही भएर पनि अन्तर्वार्तामा खासै अन्तर पर्दैन ।
७. अन्तर्वार्तामा अङ्कभार कति हुन्छ
लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० भएमा अन्तर्वार्ताको अङ्कभार २० हुन्छ । यसपछि लिखित परीक्षा पूर्णाङ्कमा थप हुने प्रत्येक १०० पूर्णाङ्क भित्र अन्तर्वार्ताको अङ्कभार १० अङ्कका दरले थप हुने व्यवस्था छ । जस्तै लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क क्रमशः १००, २००, ३०० र ४०० भएमा अन्तर्वार्ताको अङ्कभार क्रमशः २०, ३०, ४० र ५० हुन्छ ।
१०. अन्तर्वार्ता गर्दा अन्तर्वार्ताकारले ध्यान दिनु पर्ने कुरा,
अन्तर्वार्ता समितिका सदस्यले प्रश्न गर्दा सरल भाषामा प्रश्न गर्नु पर्ने, व्यक्तिको शैक्षिक उपाधि, अभिरुचि, मनोवृत्ति एवं पदको स्तरसँग तालमेल हुने गरी प्रश्न गर्ने, व्यक्तिले उत्तर दिन नसकेका क्षेत्रमा पुनः प्रश्न नगर्ने, उम्मेदवारको उत्तरप्रति अनावश्यक रूपमा कडा प्रतिक्रिया नदिने जस्ता व्यवस्था भएपनि अन्तर्वार्ता समितिका सदस्यले कहिलेकाहीँ कसैलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न सक्छन् । उत्तर दियो, फेरि प्रश्न गर्ने, उत्तरलाई घुमाइदिने, उत्तर होइन भनिदिने, तपाईंको कुरामा म सहमत छैन भनिदिने, तपार्इं धेरै नकारात्मक हुनु भयो भन्ने आदि जस्ता व्यवहार गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्था आएमा आफू परिपक्क हुनुपर्दछ । आत्तिनु हँुदैन । रातोपिरो हुनु हँदैन । सहज वातावरण बनाउनु पर्छ । आत्मवल बढाउनु पर्दछ । प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दा थप प्रष्ट पारिदिनु पर्दछ । आफूलाई ज्ञान भएको विषयमा बढी जोड दिनुपर्दछ । आफूलाई नआउने प्रश्न सजिलै आउँदैन भन्नुु पर्दछ । अन्तर्वार्र्तामा कति उत्तर मिल्योभन्दा पनि कसरी कस्तो वातावरणमा अन्तर्वार्ता लिइयो त्यो ठूलो हुन्छ । सबै प्रश्नको उत्तर सबैले भन्न सकिदैन । राम्रो व्यवहार, स्पष्ट उत्तर र सबैलाई समान नजर दिएमा सामान्यतयाः अन्तर्वार्ता सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिले प्रत्येक अन्तर्वार्ताकारलाई आँखामा बराबर नजर लगाउने कार्य हो । अन्तर्वार्ता समितिका कुनै एक सदस्यले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदा उनलाई मात्र एकोहोरो नहेरी अरू सदस्यलाई पनि बराबर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सवैलाई समान व्यवहार र समान महìव दिएको देखिन्छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको कुनै व्यक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश पाउने उद्देश्यले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, उमेर, नागरिकता, अनुभव आदि ढाँटेको देखिएमा लोकसेवा आयोगले निजलाई अन्तर्वार्तामा समावेश नगर्ने र निजको दरखास्त फारामसमेत रद्दगर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका यस्ता प्रकृतिका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताबाट हटाई निजको दरखास्त फाराम रद्द गर्दै आइरहेको छ । अन्तमा, अन्तर्वार्ता एउटा संवाद हो, जसमा दोहोरो वार्तालापबाट व्यक्तिको व्यक्तित्वको परीक्षण हुन्छ । अन्तर्वार्तामा खासगरी आफूलाई चाहिएको पद र पदको कार्यविवरण, आफ्नो कुनै कार्ययोजना, शैक्षिक योग्यता र मुख्य विषय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक विषयको सामान्य जानकारी जस्ता विषयमा ध्यान दिई मुख्यतः आफूमा आत्मबल बढाउनु पर्दछ । यसबाट अन्तर्वार्तामा सफल हुन सकिन्छ ।